“DAAWO”Maamulka Gobolka oo muwaadin Soomaaliyeed ku wareejiyay guri uu lahaa – Radio Muqdisho
“DAAWO”Maamulka Gobolka oo muwaadin Soomaaliyeed ku wareejiyay guri uu lahaa
Maamulka Gobolka Banaadir oo kaashanaya kan degmada Howlwadaag ayaa maanta ku guuleystay in muwaadin Soomaaliyeed ay dib ugu celiyaan guri muddo 23 sanno laga haystay.
Milkiiliha guriga iska lahaa ayaa maamulka gobolka, kan degmada iyo intii kale ee gacan ka geysatay uga mahadceliyay dib u soo celinta gurigiisa, waxaana ku faraxsanahay in milkiliyadda guriga ay maanta dib gacanta iigu soo laabatay.
Ninkii deganaa guriga oo dokomintiyo been abuur ah looga iibsaday ayaa cafis waydiistay milkiilaha guriga, maadaama isagu naftiisa la qiyaamay oo warqado been abuur ah looga iibsaday, isagoo maamulka Gobolka ka codsaday in ay wax ka qabtaan dadka dokumintiyada been abuurka ah dadka wax uga iibinaya.
Guddoomiyaha Degmada Howlwadaag Axmed Nuur Siyaad oo isna goobta hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in ay tahay markii labaad oo ay wareejinayaan guri nin uu iska leeyahay muwaadin Soomaaliyeed oo 23 sano laga deganaa, isagoo shacabka ugu baaqay in ciddi laga haysto guri ay xafiiska Maamulka degmada la xiriiraan.
Kaaliyaha Duqa Muqdisho Sheekh Cumar ayaa sheegay in maamulka Gobolka Banaadir uu diyaar u yahay in dib hantida ma guurtada ah ugu celiyo muwaadiniinta iska leh, isagoo bulshada ka dalbaday inay baneeyaan guryaha iyo dhulalka aysan lahayn.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Oo Wadajir Ula Kulmay Madaxweynayaasha Koonfur Galbeed, Jubbaland,Xildhibaanno Iyo Odayaal Dhaqameed “SAWIRRO+ MUUQAAL”
“DAAWO”Safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo qalab guddoonsiiyay maamulka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed
"DAAWO"Safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo qalab guddoonsiiyay maamulka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed